Miyaynu heli karaynaa saaxiibo on Spotify iyo sidee? Waxaad u timaadeen inaad meel sax ah
Spotify leedahay wax badan oo ka mid ah muuqaalada sheegaa inaynu innagu nahay taageere weyn u ah, dad badan oo aynu ka hadalnay ee la soo dhaafay iyo sidoo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax gaar ah oo ku saabsan Spotify in si fudud waa hanad; inkastoo ahaanshaha kaliya music ah adeeg geeyo , aqlabiyadda interface la Spotify waxaa loogu talagalay dhinaca socda saaxiibadaa iyo music iyaga la wadaago.
Go guud si ikhtiyaar ah ee soo socda saaxiibadaa waa 'raac' ah tab. Marka lagu tuujiyey, waxay ku siinaysaa talooyin badan oo ku saabsan dadka si kastaba ha ahaatee raacaan marka ay timaado raadinta qof gaar ah, Spotify leeyahay isku qasan. Waa hagaag, waxaan halkan u taaganahay in la sameeyo oo dhan waa u fududahay in aad u.
Part1. Sida loo helo saaxiibo on Spotify
Part2.How inaad kala soo baxdo ka Spotify iyo wadaagto asxaabtaada
Part3. Bedelka music inay mobile saaxiibada '
1.How si aad u hesho saaxiibo on Spotify
Si aad u bilaabaan oo leh, login in aad xisaabta Spotify iyo riix qaybta raac. Doorashadan waxa aanu si toos ah kor u jiid iyo muujiyaan saaxiibadaa Facebook oo sidoo kale halkaas waxaa ku Spotify.
Hadda, guji sanduuqa raadinta siiyo dhinaca bidix ee kore gacanta iyo nooca magaca qofka aad rabto in aad si aad u ogaato waxa ay beegsadeen gala. Waayo, magaca si ay u muujiyaan kor, waa in uu noqon on Spotify iyo sidoo kale xiriir ah oo ku saabsan xisaabtaada Facebook.
Raadi si aad saaxiibadaa la isticmaalayo ay username. Dad badan oo iyaga ka mid ah oo saxiixdo on Spotify la Xisaabtooda Facebook laga yaabaa in aysan si dhab ah u ogaadaan waxa ay Spotify username yahay. Sidaas, waxaa laga yaabaa inaad u leeyihiin in ay iyaga soo xiriir si gooni gooni ah iyo ka codso inay si login on Spotify, ay u helaan fursad u Account ka dibna hubi waxa ay username yahay. Marka aad qabtid, u eegay adiga oo isticmaaleya isticmaale account uu noqonayaa mid aad u fudud.
Si fudud u tagaan si ay mar kale sanduuqa raadinta iyo waqtiga noocan ah ee 'Spotify: user: isgarad' oo ka dhacay galaan. Halkan, bedelo iyo isgarad-magacaaga dhabta ah ee saaxiibadaa.
Sida loo soo dejisan Spotify iyo wadaagto asxaabtaada
i Ma waxaad maqlay muusika aad dhawaan jeclaa on Spotify oo aad rabto inaad kala soo baxdo ama badbaadin in ay dhegeystaan ​​marka offline? Waa hagaag, ha ku faraxsanahay in aad ogtahay in Wondershare TunesGo ayaa lagala soo Spotify iyo goobaha kale music hoorto aad u fudud oo si sahlan ayaan ahay. Waxa uu ka dhisay feature kuu oggolaanaysa in aad kala soo bixi ama badbaadin music wax ka Spotify iyo goobaha kale music hoorto xaq in aad computer la qasabno yar. Raac tallaabooyinka hoose si aad si deg deg ah ka soo dejisan Spotify.
Laga soo bilaabo aad app Spotify, dooro music aad rabto in aad kala soo bixi guji badhanka play ah
Open Wondershare TunesGo oo guji taariikhqorihii ee dhinaca bidix ka dibna riix on REC xarunta of Wondershare TunesGo si ay u bilaabaan wax lagu qoro.
Marka aad samaysay qoro, riix badhanka joogsiga sida kaaga muuqata sawirka hoose. g
Si aad u aragto music aad duubay, guji duubay dhinaca bidix ee software TunesGo Wondershare.
Si loo badbaadiyo si aad u computer, dooro music aad rabto inuu wax badbaadiyo oo guji dhoofinta. Hadda, doorato meesha aad rabto in aad u badbaadin oo aad samaysay.
3.Transfer music inay mobile saaxiibada '
Fur TunesGo Wondershare iyo xirmaan mobile saaxiibadaa "si aad u computer.
Dooro waxa aad rabto si ay u gudbiyaan oo guji badhanka kala iibsiga.
Riix badhanka midig ee hoose ee shaashadda si ay u arkaan horumarka
Muuqaalada More ee TunesGo Wondershare
The user interface fudud ee TunesGo Wondershare u fududaynaysa isticmaala inay kala soo bixi, rikoorka kala iibsiga music. Wondershare TunesGo ma istaagaan Spotify oo kaliya, waxa ay taageertaa YouTube, Sound Cloud, Pandora, vimeo iyo wax ka badan. Tani waxay ka dhigan users sidoo kale kala soo bixi kartaa music ka YouTube, Sound Cloud iyo goobaha kale ee fudayd.
Feature Saamiga Wondershare TunesGo ka dhigaysa in ay ka sii cabsi badan. Users ay music iyo playlist saaxiibadooda warbaahinta bulshada iyo email wadaagi karo. La wadaag playlist saaxiibadaa on Facebook ama Twitter oo ha ogaadeen waxa aad dhagaysanayso la feature saamiga.
Ma rabtaa in aad abaabulo maktabadda Lugood aad? Wondershare TunesGo waa qalab aad u. Waxay kaa caawinaysaa in aad abaabulo maktabadda Lugood aad by tags music aad qamaar, si qamaar loogu dabool music aad, tirka songs nuqul iyo xitaa nadiifinta kuwan raadkaygay maqan si aad maktabadda nadiif ah oo cusub. Oo intaas oo dhan waxaa la samayn karaa kaliya click ah badhan.
Users sidoo kale loogu badalo karaan muusikadooda qaab la jaan qaada qalabka. No oo walwal badan oo ku saabsan waafaqid ee music ah in qalab aad sababtoo ah TunesGo Wondershare kuu ogolaanaysaa inaad badalo file kasta oo muusiko ah, si loo waafajiyo qaab qalab aad.
Dib maktabadda music dhan cabsi la'aan ah ku waayi karto music iyo playlist. Si fudud guji "dib ilaa music iyo playlists si aad u computer" button ka dib markii isku xidha aad telefoon in ay dib u aad music iyo playlists. Users sidoo kale ka heli karaan dib u soo kaceen oo mar kasta oo ay u baahan tahay loogu soo celiyo.
Laga soo bilaabo abaabulka maktabadda si wareejinta music iyo diinta aad music in degsado music, muuqaalada TunesGo Wondershare waxa xalka ugu fiican ee aad u dhigaysa.
> Resource > Spotify > Miyaynu heli karaynaa Saaxiibadu Spotify iyo sidee?